श्रीमतीलाई यौनसम्पर्कका लागि आकर्षित गर्ने यस्ता छन पाँच तरिका - Chitwan Online Khabar
श्रीमतीलाई यौनसम्पर्कका लागि आकर्षित गर्ने यस्ता छन पाँच तरिका
२३ भाद्र २०७६, सोमबार ०२:०९ chitwan online khabarNo Comment on श्रीमतीलाई यौनसम्पर्कका लागि आकर्षित गर्ने यस्ता छन पाँच तरिका
काठमाडौँ । हुन त हाम्रो समाजमा श्रीमान् श्रीमतीबीच अनिवार्य यौनसम्पर्क हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । उनीहरुले सहवास गर्न कुनै पनि मेहनत गर्नुपर्दैन । जब सम्भोग गर्न मन लाग्छ गर्न पाइन्छ भन्ने सोच पनि नभएको होइन । झन हिन्दूधर्ममा त श्रीमान् श्रीमतीबीच सृष्टिको निरन्तरता गर्नलाई यौनसम्पर्क अनिवार्य भनिएको छ ।
तर यौनसम्पर्कलाई केवल सृष्टि निरन्तरता गर्ने हिसावले आधुनिक युगमा लिन छाडिएको छ । यौनलाई प्रेम आनन्द र जीवनशैलीको रुपमा हेर्न थालिएको छ । जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्दा सम्बन्धमा खल्लोपना आउने तथा एक अर्कासँग समय बिताउन मन नलाग्ने पनि हुनसक्छ ।
आजभोलि त श्रीमानले श्रीमतीको इच्छाविपरीत हुने सम्भोगलाई वैवाहिक बलात्कार भनेर नाम समेत दिइएको छ । श्रीमती बलात्कारीको आरोपबाट जोगिन र सम्भावित बलात्कार हुनबाट जोगिन यी उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
किनकी यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण उनको जिन्दगीमा बच्चा, खानापिना र कार्यालयको काम हुने गर्दछ । त्यसकारण यदि तपाईं उनीसँग यी सवै कामको बाबजुद पनि यौनसम्पर्कका लागि समय निकालिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने घरको काममा हात लगाउने बी लगाउनु होस् ।
जव यौनसम्पर्क गर्न थाल्नुहुन्छ यो भन्न छाडिदिनु होस् की, तिम्रो स्तन कति झोलिएको ? तिम्रो शरीर किन यति गिलो ? यो कति नराम्रो दाग ? तिमीले म वाहेक अरुसँग सहवास त गरेकी छैनौं नि आदि इत्यादि । यी कुराले उनीमा निराशा जगाउँछ । त्यसैले यौनसम्पर्क झर्किलो बन्दछ । राजधानी दैनिकबाट
५ माघ २०७६, आईतवार १९:४४
३ माघ २०७६, शुक्रबार २०:०१
२ माघ २०७६, बिहीबार २१:५३
क्षेत्रीय होटल संघमा जुट्यो सहमति,अध्यक्षमा भट्टराई चयन
कण्डमका १० अदभूत कमाल: लाज नमानिकन हेर्नुहोस कति कामलाग्दो रहेछ !